Karazana asa fifandirana ny niady hevitra ny antoko:
individual asa disadisa rehefa misy fiantraikany ny tombontsoan’ny tsirairay ny mpiasa;
fiaraha-miasa ny fifandirana ny mahakasika manontolo ny mpiasa (ohatra, tsy fahombiazana ny mpampiasa fifanarahana iombonana) na ny ampahany (misaraka ara-drafitra subdivisions).
Ny karazan asa fifandraisana izay izy ireo no hitsangana (hiarina avy ao amin’ny foto-kevitra ny lalàna mifehy ny asa):
asa fifandirana hitsangana avy amin’ny fandikan-dalàna ny asa fifandraisana (ohatra, fa tsy ny fandoavana ny karama, ny fandroahana tsy ara-dalàna, ny fanemorana ny famoahana ny asa firaketana an-tsoratra, sns.);
asa fifandirana hitsangana avy amin’ny fandikan-dalàna ny fifandraisana mifandray mivantana amin’ny asa, etc.
hitsangana avy amin’ny fanitsakitsahana ny fifandraisana, fa ny fandaminana sy ny fitantanana ny asa. Ohatra, ny mpampiasa dia mitaky ny fanatanterahana ny asa fenitra, tsy maintsy hiatrika ny dingana ara-teknolojia, na dia mitaky izay rehetra famokarana asa ny mpiasa manatanteraka amin’ny haingana indrindra ny ara-dalàna ny hafainganam-pandeha ny asa famonoana ho faty izany, na ny tsy hamoaka ny mpiasa amin’ny asany mandra-izy tsy manatanteraka asa famokarana, sy T.
p, ary ireo mpiasa any amin’ny fitsarana efa fantatra ireo fitakiana ireo tsy ara-dalàna;
hitsangana avy amin’ny fandikan-dalàna ny asa fifandraisana ho an’ny mpampiasa
Ohatra, ny fitsarana dia mety ho niantso ny tsy ara-dalàna ny fandàvana ny asa;
hitsangana avy amin’ny fanitsakitsahana ny fiaraha-miasa ara-tsosialy ny fifandraisana.
Ohatra, ny mpampiasa dia tsy hampihatra ny fifanarahana iombonana sy ny mpiasa any amin’ny fitsarana mitaky ny fanatanterahana ny fepetra voalazan’ny
Araka ny mahazatra, ireo fandikàn-dalàna ireo mba hitarika ny fiaraha-miasa fatratra fifandirana, saingy ny mahaliana afaka miaro sy ny mpiasa tsirairay isam-batan’olona;
hitsangana avy amin’ny tapaka ny fifandraisana tamin’ny ampahany amin’ireo mpiasa (na ny solontenan’ny vatana) amin’ny fitantanana ny fikambanana. Ohatra, ny mpampiasa mandany ny fitsipika ao an-toerana raha tsy misy ny fanekena ny kilonga Sendika, fikambanana;
hitsangana avy amin’ny banga ny fifandraisana amin’ny fiofanana arak’asa, hanabeazana sy avo lenta ny fiofanana ho an’ny mpampiasa. Ohatra, ny mpampiasa dia mitaky ny mpiasa mba handoavana ny saram-na mametraka ny fisedrana fe-potoana, amin ny fianarana mahomby;
hitsangana avy amin’ny banga ny fifandraisana eo amin’ny ara-nofo andraikitry ny asa ny fifanarahana. Ohatra, ny mpampiasa ao amin’ny fandikana ny lalàna mifehy ny asa fiampangana ny mpiasa feno ny fahasimbana eo amin’ny mihoatra ny eo ho eo ny karama, araka ny didim-panjakana;
hitsangana avy amin’ny banga ny fifandraisana ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso. Noho izany, ny mpampiasa sy ny mpiasa dia afaka miantso fanoherana ny tsy ara-dalàna ny fampiharana ny fepetra ara-panjakana andraikitra ho an’ny fanitsakitsahana ny fenitra ny asa fiarovana, ny antoko mety hahaliana manohitra ny asa amin’ny fanadihadiana ny loza, raha izy ireo no tsy manaiky ny votoaty sy ny fehinteny;
hitsangana avy amin’ny banga ny fifandraisana eo amin’ny fanapahan-kevitra ny asa fifandirana. Ohatra, ny antoko izay tsy manaiky ny fanapahan-kevitry ny Vaomiera mikasika ny herim-pamokarana fifandirana, antso manohitra izany ny fitsarana ary ny mpampiasa eny amin’ny fitsarana mba manaiky ny fitokonana ara-dalàna;
hitsangana avy amin’ny banga ny fifandraisana amin’ny tsy maintsy fiantohana ara-tsosialy. Ohatra, ny mpampiasa tsy mety mandoa ny mpiasa roa andro narary, avelao, na ny lalàna telo andro voalohany karama avy amin’ny mpampiasa sy ny mpiasa dia voatery mitodika any amin’ny CCC
Ny Fananana ara-tsaina Lalàna - HG